New Core Banking Info – AYA Bank
New Core Banking Info
October 30, 2020 Pyae Kyaw
The Core Banking Upgrade
လေးစားအပ်ပါသော AYA Bank သုံးစွဲသူများခင်ဗျာ
နည်းပညာအသစ်များနှင့်အတူ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လျှက် AYA Bank မှ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ယခုအခါ သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုလွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်စေရန်အတွက် AYA Bank ၏ Core Banking System အသစ်ကို (၂၀ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်) မှစတင်ကာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် AYA Bank သုံးစွဲသူမိတ်ဆွေများ ကြိုတင်သိရှိထားရန်လိုအပ်နိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းအမှတ် (Account Number) များပြောင်းလဲခြင်း
ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည့် Core Banking System တွင် Bank Account Number များ (11) လုံးသာရှိတော့မည်ဖြစ်ပြီး၊အသစ်ပြောင်းလဲမည့် လူကြီးမင်းတို့၏ Account Number များကို ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး Online Link https://accounts.ayabank.com မှတဆင့် သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာဧရာဝတီဘဏ်ခွဲ များတွင် ကြိုတင်စုံစမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ https://accounts.ayabank.com တွင် မိမိ၏ နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ Account Number (16) လုံး၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် မိမိအကောင့်ဖွင့်ခဲ့သော ဘဏ်ခွဲတို့အား မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ ရိုက်ထည့်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်သို့ Account နံပါတ်အသစ်အား SMS ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Mobile Banking သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း System အသစ်စတင်မည့် (ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့) မှစတင်ကာ မိမိတို့၏ Mobile Banking Home Page မှတဆင့် (Mobile Banking နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်) Account နံပါတ်အသစ်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ချေးငွေ နှင့် Hire Purchase (HP) ငွေစာရင်းအကောင့်နံပါတ်များကိုလည်း ဘဏ်ခွဲများတွင် ကြိုတင်သွားရောက် စုံစမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ငွေစုစာအုပ်များ (Passbook)၊ ချက်စာအုပ်များ (Cheque) နှင့် ဘဏ်ကဒ်များ (Card)
လူကြီးမင်းတို့ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ငွေစုစာအုပ်များ (Passbook)၊ ချက်စာအုပ်များ (Cheque) နှင့် ဘဏ်ကဒ်များ (Card) ကို ပြောင်းလဲရန်မလိုဘဲ ၊ လက်ရှိအတိုင်းဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Mobile Banking, Internet Banking and ATM
တစ်ဦးချင်းအသုံးပြုနေသော Mobile Banking ၊ Internet Banking နှင့် ATM Card များအား လက်ရှိ User Name ၊ Password များအတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိ ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(Mobile Banking, Internet Banking များတွင် ကြိုတင်စီမံပြုလုပ်ထားသော Schedule Payment များကိုမူ Core Banking system အသစ်စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စတင်ကာပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Transaction History များကိုလည်း 20.July.21 မှစသော Transaction များဖြင့်သာ အသစ်ပြသမည် ဖြစ်သောကြောင့် ၊ Core Banking မပြောင်းမီ ရှေ့ပိုင်းရက်များအတွင်း မိမိတို့လိုအပ်နိုင်သော Transaction History များကို Excel Export, Print, Screen Capture များပြုလုပ်၍ ကြိုတင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါရန် အသိပေးလိုပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက 20.July.21 နောက်ပိုင်းတွင် iBanking ၏ “Payment” Functionအောက်ရှိ iBanking Transaction History တွင် (ပြီးခဲ့သော ၃လအတွင်း) Transaction History များ ယခုအတိုင်း ဆက်လက် ကြည့်ရှုနိုင်သလို၊ နီးစပ်ရာ AYA ဘဏ်ခွဲများတွင် ပုံမှန်ထုတ်ယူနေကြ Bank Statement များအနေဖြင့် ထုတ်ယူကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလွှဲရာတွင် မိမိငွေလွှဲမည့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ငွေစာရင်းပိုင်ရှင်၏ Account နံပါတ်အသစ်များကို ကာယကံရှင်များထံမှ ဆက်သွယ်တောင်းယူထားရန်လိုအပ်ပါမည်။
အဖွဲ့အစည်းများတွင်အသုံးပြုနေသော Corporate Internet Banking များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများ ထပ်မံပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပြီး Login ဝင်ရန်လိုအပ်သော Information များဖြစ်သည့် (URL ၊User ID ၊ Company ID ၊ Password) များတွင် အပြောင်းအလဲအချို့ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ Relationship Manager များမှတဆင့် ကြိုတင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်တိုင်း လျှို့ဝှက်ထားရှိပါ။
Core Banking System ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီး AYA Bank အနေဖြင့် သုံးစွဲသူများထံမှ အရေးကြီးသတင်းအချက်လက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ တောင်းခံခြင်း ( User Name ၊ Password ၊ မှတ်ပုံတင် )၊ ငွေကြေးတစုံတရာထပ်မံကောက်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် အခြားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ လိမ်လည်တောင်းယူခံရခြင်း ၊ အခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ မသမာမှုများပြုလုပ်လာနိုင်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် Customerများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ အရေးကြီးသောသတင်း၊ အချက်အလက်များကို အချိန်ပြည့်လျှို့ဝှက်ထားရှိကြပါရန် လည်း လေးစားစွာ အသိပေး တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
အခြားသိရှိလိုသည်များအတွက် အထွေထွေ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို AYA Bank ၏ Contact Center ဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်သော 01-2317777 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
The culmination of its commitment to continuous improvement and expansion of its depth and breadth of service to its cherished customers, by providing them with progressively more efficient and intuitive platforms, through the adoption of new technologies, AYA Bank will be upgrading to its new Core Banking System on 20 July 2021.
In the interest of updating its valued users prior to launch and ensuringaseamless transition between systems, key points pertaining to major changes are presented below:
As the Core Banking System will feature Bank Account Numbers with 11 digits, instead of the current 16, customers will be able to obtain their new Account Number via online https://accounts.ayabank.com or branch, starting from 11 Jan 2021. Customer can type Name, NRC No., Account Number (16 digit), Phone Number and Home Branch Name in https://accounts.ayabank.com, then Bank will send back New Account Number to your typed Phone Number via SMS. Besides, customers using the AYA Mobile Banking application will be able to see their new account numbers (applicable for accounts linked to Internet/ Mobile banking) that the application will begin displaying on its Home Page starting the 1st day of new system (20 July 2021). Loan and Hire Purchase (HP) account numbers will be available at all AYA Bank branches upon customer inquiry, prior to and following the Core Banking update.
The Passbook, Cheque and Card
The bank is happy to announce that, despite the new account numbers, customers are not required to make any changes to their Passbook, Cheque or Card; these products retain their features and can be used just as before.
No changes are required to be made for individual Mobile Banking, Internet Banking and ATM Card; customers will be able to sign in using their current Username and Password and continue using the products normally.
With the new system cutover, once the new system is in place, customers will be required to re-enter their schedule payments/ Fast Pay/ etc. in their platforms.
A consequence of the breadth of its upgrade, the system will only display, on Mobile Banking and Internet Banking both, new customer transactions that occur after the 20th of July, 2021. Therefore, it is advised that, should customers wish to view it for periods preceding the schedule Core Banking update, they preemptively download and save their transaction histories now by utilizing the most convenient means, be it exporting to Excel, printing, or screen capturing. However, though the ‘transaction details’ tool under the ‘information Inquiry’ function on the iBanking site is affected by the aforementioned refresh, the alternative procedure for transaction history viewing, the ‘iBanking transaction history’ tool under the ‘Payment’ function, is not. Thus, customers can follow it to view their transaction history (limited to3months) for periods prior to the 20th of July 2021. Alternatively, customers will be, as they currently are, obtain their transaction history by requesting for their Bank Statement at the nearest AYA Bank branch.
As all customers will receive an update to their account numbers, those wishing to make transfers are respectfully reminded to be sure to obtain the recipient’s new account number from them directly.
The Corporate Internet Banking service will be receivingawide array of upgrades- improvements upon, and introductions of, features that enable AYA to serve its valued customers better. As such, corporate customers will require new Login information (URL, User ID, Company ID, Password), the details of which can be acquired from one’s Relationship Manager, prior to and following the system overhaul.
At no point during the Core Banking system cutover, or at any time, will AYA Bank extend unsolicited inquiries to customers seeking their log-in information e.g. Username, Password, NRC, or any other information related to log-in, nor will make any charges pertaining to the system update; such solicitations are to be considered fraudulent. As such, to ensure account integrity, customers are respectfully urged to keep their key personal information confidential.
All questions can be directed to the AYA Bank Contact Center, available at 01-2317777.
AYA Bank: Your Trusted Partner
>> New Core Banking Info